GNUnet 0.13 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
GNUnet 0.13 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Shanduro itsva ye GNUnet 0.13 yakatoburitswa uye inowanikwa kune wese munhu. Mune iyi vhezheni itsva, a yezvinyorwa zvitsva izvo zvinoratidzika ndiyo iyo GNUnet Yakapihwa Nhamba Chiremera rejista (WINS), GNS kuitiswa uye zvimwe.
Kune avo vanobvisa GNUnet, iwe unofanirwa kuziva kuti inoitirwa kuvaka yakatemerwa uye yakachengeteka network dzeP2P.
1 Nezve GNUnet
2 Main nyowani maficha eGNUnet 0.13
3 Maitiro ekuisa GNUnet paLinux?
Networks yakavakwa neGNUnet haina kana poindi imwe yekutadza uye ivo vanogona kuvimbisa kutadza kwevanoshandisa ruzivo rwepachivande, kusanganisira kubviswa kweanogona kushungurudzwa nemasangano enjere uye manejimendi nekuwana netiweki node. Iyo vhezheni inoiswa mucherechedzo seine yakakosha protocol shanduko inotyora kumashure kumashure kuenderana 0.12.x.
GNUnet inotsigira P2P network kuburikidza neTCP, UDP, HTTP / HTTPS, Bluetooth uye WLAN, uye inogona kushanda muF2F modhi (Shamwari kune Shamwari).
Se inotsigira NAT yekupfuura, kusanganisira kushandiswa kwe UPnP uye ICMP. Izvo zvinokwanisika kushandisa yakagoverwa hash tafura (DHT) kugadzirisa iko iko data.
Kunze kwezvouye nzira dzinopihwa kuendesa mesh network. Kuti usarudze uye ubvise kodzero dzekuwana, chinongedzo chakatemwa chezvekudzosera hunhu hunoshandiswa, uchishandisa iyo GNS (GNU Naming System) uye hunhu-hwakavakirwa kunyorera (Attribute-Based Encryption).
Iyo system inozivikanwa nekushandisa zvishoma zvigadzirwa uye kushandiswa kwemaumbirwo akaverengeka kuverengera kupatsanurwa pakati pezvinhu.
Zvivakwa zvisingachinjiki zvinopihwa kunyoreswa uye nhamba. Zvekuvandudza ekupedzisira-mushandisi mashandisirwo, GNUnet inopa API yeC mutauro uye maforodha emimwe mitauro yekuronga.
Kurerutsa budiriro, zvinokurudzirwa kushandisa zviitiko zvechiitiko uye maitiro panzvimbo peshinda. Iyo sisitimu inosanganisira raibhurari yekuyedza yekumisikidza kuendesa kweyekuyedza network inovhara makumi ezviuru zvemaviri.
Main nyowani maficha eGNUnet 0.13
Mune iyi vhezheni nyowani sezvatataura pakutanga, hutsva hukuru ndewekuti iyo WINS rekodhi yakagadzwa (GNUnet Yakapihwa Numeri Chiremera), iri basa rekupa mazita nekero kuGNUnet.
Izvi futi pamwe nekuitwa kweiyo yakatemwa domain zita GNS Yakaenderana ine zvirevo zvinotsanangurwa neIETF.
Imwe shanduko yakakosha ndeyekuti basa reNSS plugin 'block' rakagadziriswa, Mitsva mitsva yekuwedzera yakawedzerwa kumarekodhi asina kunyorwa pachena pasi petiki yakapihwa asi ichidzoserwa nemusarudzo.
Mune kiyi yekubvisa nzira (GNS / REVOCATION), humbowo hwebasa rakapedzwa basa inopfuudzwa ichishandisa iyo Argon2 hash algorithm.
Mune yakasarudzika nzvimbo yekuzivisa hunhu hwekushandura sevhisi (RECLAIM), iyo tikiti saizi yakawedzerwa kusvika mazana maviri nemakumi maviri nemashanu.
Wakawedzera yambiro kuburitsa kune iyo gnunet-namestore utility kana uchiwedzera TLSA kana SRV zvinyorwa kunze kweBHOX rekodhi.
Iyo plug-in yekufambisa inoshandisa iyo UDP protocol yekuchinjisa dhata yakaendeswa kuchikamu chekuyedza nekuda kwekugadzikana nyaya;
Iyo yakakosha faira fomati uye iyo ECDSA yakavanzika kiyi serialization nzira yakabatana nemamwe maraibhurari (ekare makiyi anomira kushanda).
Iyo libsodium raibhurari inoshandiswa sekumisikidza kwekuvharira algorithms kunoenderana ne elliptic curves.
Wakawedzera kugona kugadzira zvinoshandiswa necURL raibhurari, isina hukama nehunnut.
Buildbot Inoenderera Inobatanidza Server yakadzoka.
Iyo libmicrohttpd, libjansson, uye libsodium maraibhurari akaisirwa mune yekuvaka kutsamira.
Maitiro ekuisa GNUnet paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa ichi chimiro, vanogona kuzviita nekutevera mirairo iyo yatinogovana pazasi.
Ndivanaani Arch Linux, Manjaro, Arco Linux kana chero vamwe vashandisi vanobva, ingovhura terminal uye nyora unotevera kuraira mairi:
Iye zvino kune avo vanoshandisa Fedora, Iyo yekumisikidza inogona kuitwa kutanga nekugonesa iyo repository nemutemo unotevera:
Uye gare gare vanoisa nemurairo uyu:
Finalmente iwe unogona zvakare kuwana chimiro nekunyora kodhi yako kune izvi unogona kuteedzera rairo zvakadzama mune iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » GNUnet 0.13 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
kuvhuraSUSE Leap 15.2 yakatoburitswa, ziva shanduko uye nhau